musha » Dzazvino Nhau Zvinyorwa » African Tourism Bhodhi » Kwete Kuchengeta Imba? Hapana masevhisi? Ita kuti kufamba kuve kwakanaka zvakare!
African Tourism Bhodhi • Kuputsa Nhau Dzenyika Dzepasi Pose • Kuputsa Kufamba Nhau • Health News • Hospitality Industry • Investments • Nhau Dzakanaka • nhau • Kufamba Kwamugumo Kwidziridzo • Kufamba Wire Nhau • Trending Now
The World Tourism Network nhasi yakatumira bepa rekumisikidza uye yambiro kuti masevhisi ekucheka anozodzikira kana kumisa kuvakwazve kuri kudiwa kweindasitiri yekushanya nekushanya.
Iyo World Tourism Network inonzwisisa kuti muzera reCovid, ndege, mamwe maresitorendi nemahotera aifanira kudzikisa masevhisi kuti vararame.
Nehurombo, panguva ino, takaona pasi rose kuderera kwemhando yechigadzirwa chekushanya chinopihwa veruzhinji.
Munyika yepashure yeCCIDID-19 izvi zvinogona kureva kuti kukwezva kwekufamba kuri kubviswa nhanho yenhanho, zvichiita kuti kudzokororwa kunetse.
The World Tourism Network iri kukurudzira vatungamiriri veindasitiri kuti vafambise, vafadze, uye vakwezve.
Kucheka kuchengetedza dzimba uye kusapa mamwe mabasa ekuchengetedza-mari kunononoka kana kutomisa kuvakwa kweindasitiri yedu yekufambisa neyekushanya.
Avo vanozokwezva vashanyi nekumwemwerera uye masevhisi akanaka vachave vakundi.
Kufamba kunofanirwa kuve kwakanaka zvakare!
"Nyika ichafanirwa kugarisana neCOVID-19. Mukana wekudzosa kushanya uye kushanya kumatanho a2019 uye kuita kuti rwendo rusinakidze, rusinakidze, kana rumbozha rwendo rwunopokana,” akadaro Juergen Steinmetz, Sachigaro weWorld Tourism Network.
” Avo vanosimudzira uye vasingaderedze masevhisi ndivo vachakunda zvikuru. Matanho ekucheka mari achaenda pamwe chete nemhedzisiro yekucheka kwebhizinesi.
"Tinokurudzira mahotera kuti aenderere mberi nekuchengeta dzimba, kuita kuti maresitorendi nemabhawa avhurike, uye usakanganwa kuramba mabasa nekunyemwerera!"
WTN inoda kukurudzira vanobatana kuti vashande re-enchanting tourism munyika ine tariro post-covid. Vafambi vanoda kufefeterwa, kufamba kunofanirwa kunakidza, kwete kunetsa, uye kupa masevhisi ausingawane kana uchigara pamba.
Ita kuti kufamba kuve kwakanaka zvakare:
Dzorera kucheneswa kwekamuri nguva dzose uye kuchinja kwekurara mumahotera nenzvimbo dzekutandarira.
Simudzira sevhisi inowanikwa mundege uye kubvisa mari yakawanda.
Gadzira maawa ari nyore kushandisa kune vafambi.
Usaedze kuve zvinhu zvese kuvanhu vese.
World Tourism Network, Dr. Peter Tarlow yakatumira zvinotevera kune bepa rekuisa pane webhusaiti yeWTN.
Nehurombo, panguva ino, takaona pasi rose kuderera kwemhando yechigadzirwa chekushanya chinopihwa veruzhinji. Zvechokwadi, chimwe chechikonzero chekuderera uku kwave kuri denda. Denda rinogona kunge risiri iro chete chikonzero chekuderera uku. Vanocherekedza vanoona nezve mafambiro uye nzvimbo dzekushanyirwa vanga vachitocherekedza kutanga kunogona kuitika kwekudzikira denda risati rasvika uye kudzikira kwehunhu hwebasa pakupedzisira kuchakanganisa indasitiri yekushanya.
Zvikonzero zviri kutaurwa zvekudzikira kwemhando yebasa revatengi zvinobva pakudhura kwemafuta edzimotokari kusvika pakuderera kwehupfumi hwenyika zhinji dzekumadokero. Kunyangwe zvikonzero izvi zviri zvechokwadi uye zvechokwadi, zvinongopa chikamu chenyaya. Uyezve, kubva pamaonero eindasitiri yekufambisa uye yekushanya, zvikonzero zvisingaite: zvinhu zvinoitika kuindasitiri. Kana indasitiri yezvekushanya nekushanya ichida kubudirira munguva dzino dzakaoma, inofanira kuita zvinopfuura kungozviona semubairo wehupfumi kana huipi hwevamwe vanhu inofanirawo kuzviongorora kuti ione painogonawo kugadzirisa.
Zvichida tyisidziro huru kune indasitiri yevaraidzo (uye kusvika pamwero mudiki kune bhizinesi rekufamba indasitiri) inyaya yekuti kufamba kwakange kwarasa kunaka kwaro kwerudo uye kurongeka. Mukumhanyirira kwayo kushanda nesimba uye kuongororwa kwehuwandu, indasitiri yekufambisa uye yekushanya inogona kunge yakanganwa kuti mufambi wega wega anomiririra nyika kwaari, uye hunhu hunofanira kugara huchipfuura huwandu.
Kunyanya muindasitiri yevaraidzo yekufambisa, kushaikwa kwehuroyi uku kwave kureva kuti pane zvikonzero zvishoma uye zvishoma zvekuda kufamba uye kutora chikamu muchiitiko chekushanya.
Dzorera kucheneswa kwekamuri nguva dzose uye kuchinja kwekurara
Kukwidziridza sevhisi inowanikwa mundege uye kubvisa mari yakawanda
Gadzira maawa ari nyore kushandisa kune vafambi
Kwete kuedza kuva zvinhu zvose kuvanhu vose.
Gadzira uroyi kuburikidza nekugadzirwa kwechigadzirwa. Shambadzirai zvishoma uye mupe zvakawanda.
Kana kushanya kuchizopora kubva mukusavapo mubhizinesi mugore rapfuura nehafu saka ichafanirwa kutsvaga nzira dzekupfuura zvinotarisirwa uye usambofa wakapfuudza nyaya yako. Nzira yakanakisa yekushambadzira chigadzirwa chakanaka uye basa rakanaka. Indasitiri yekushanya inofanira kupa zvainovimbisa pamitengo inonzwisisika.
Indasitiri yekushanya inofanirwa kugadzira mamiriro ekunze akachengeteka uye akachengeteka. Panogona kuita mazango mashoma kana vanhu vachitya. Enchantment-anotungamira mabhizinesi uye nharaunda vanoona kuti munhu wese ane chikamu chekutamba mukugadzira yakanaka yekushanya ruzivo uye iyo inogadzira yakasarudzika uye yakasarudzika nharaunda kwete chete kune mushanyi asi yekushanya mabhizinesi uye nharaunda.
Gunyana 22, 2021 pa 09: 35